Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeymo ay diyaaradaha Mareykanku ka fuliyeen deegaano ka kala tirsan goboollada Shabeellada Hoose iyo Jubbada Hoose. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeymo ay diyaaradaha Mareykanku ka...
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya duqeymo ay diyaaradaha Mareykanku ka fuliyeen deegaano ka kala tirsan goboollada Shabeellada Hoose iyo Jubbada Hoose.
Previous articleMadaxweyne Cali Guudlaawe oo hoyga uu ka degan yahay Muqdisho kula kulmay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
Next articleGuddoomiyaha ururada bulshada rayidka Tahliil Shaatax oo ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan khilaafka siyaasadeed ka taagan doorashooyinka dalka ee 2021-ka.
.. Muuqaallo dhowr ah oo uu baahiyay teleefishinka Al Carabiya waxaa kasoo muuqatay gabadh uu dhalay Sadaam Xuseen oo la yiraahdo Raqad, waxay arrintani horseeday...
YAA ISKA LEH WAAJIBAADKA ARRIMAHA DOORASHOOYINKA
axmed shiikh - January 13, 2021 0